(လုၵ်ႉတီး ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း) ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
(1951-11-08) ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 8၊ 1951 (ဢႃႇယု 68)
ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ပၢႆးမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
↑ 2.0 2.1 ဦးဝင်းမြင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်. Retrieved on ၂၃ မတ် ၂၀၁၈။
↑ 4.0 4.1 4.2 ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌေဟာင်း ဦးဝင်းမြင့်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်. Eleven Media Group (၂၃ မတ် ၂၀၁၈). Retrieved on ၂၃ မတ် ၂၀၁၈။
ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇ ပီ 1951
ၼႃႈ​လိၵ်ႈၼႆ့ မႄးမႃး​ဝႆႉ ၼင်ႇ​ၵမ်း​လိုၼ်း​သုတ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း​တီႈ6ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 01:19